10ka ugu Fiican ee Jadwalka iyo Ballan-qabsiga WordPress Plugins | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/10ka Jadwal ee ugu Fiican iyo Boos Qabsiga WordPress Plugins
10ka Jadwal ee ugu Fiican iyo Boos Qabsiga WordPress Plugins
Ma waxaad qorsheyneysaa inaad ku biirto ballan-qaadka internetka ee ganacsigaaga? Ma rabtaa jadwalka ugu fiican iyo ballan qabsashada plugins WordPress? Markaa, hagahani adigaa leh!
Waa muhiim in si dhow loo eego sifooyinka plugin kasta oo WordPress ah. Waxaad heli doontaa shaqada lagama maarmaanka ah iyo dabacsanaanta si aad u kobciso ganacsigaaga beddelka. Markaad hesho mid sax ah, haynta macmiilku way fududahay in la gaaro.
Hagahan ayaa daaha ka qaadi doona 10ka kalandarka ee ugu sarreeya iyo ballamaha WordPress adiga kugu ah.
Price: Shakhsi - $12 bishii, Meherad - $28 bishii
StartBooking waa mid ka mid ah kuwa ugu awoodda badan 59-nololeed ee ka xoog badan boosaska WordPress ee laga heli karo suuqa. Si fudud ayaad u soo dejisan kartaa una rakibi kartaa si aad u maamusho dhammaan shuruudaha ballantaada.
Waxay bixisaa is-dhexgal nadiif ah oo u jeeda macaamiisha kaas oo ay ka dooran karaan liiska adeegyada oo leh taariikho iyo waqtiyo la heli karo. Marka macaamiishaadu ay diyaar u yihiin inay balamo qabsadaan, StartBooking waxay qabsataa macluumaadkooda waxayna hubisaa khibrada boosaska xirfadeed.
Waxa kale oo aad ku dari kartaa StartBooking iyo Stripe si aad u qabsato lacagaha khadka ee ballan kasta oo ballan ah. Waxa kale oo ay hubisaa hab-socodka lacag-bixinta fudud. Booska qabsashada WordPress-ka ayaa sidoo kale kordhisa beddelka. Waxay si toos ah ugu rogtay isticmaalayaasha websaydhka ay booqdeen oo ay aaminaan.
Is dhexgalka Google Calendar fudud
Si buuxda loo habeyn karo oo si fudud loo habeyn karo
Wax ka qabata kooxda iyo boosaska fasalka
Ma jiro balamo is dulsaaran
Buugaagta oo maamusha ballamaha aan xadidnayn
Helitaanka falanqaynta boos celinta muhiimka ah
2. Balamo Fudud
Balamo fudud ayaa lagu heli karaa in ka badan 21 luqadood. Waxaad xitaa u wanaajin kartaa balakoonka Booska WordPress ee xoogga leh ee aaladaha mobilada. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku dhejiso foomamka iyo jadwalka taariikhda boggaaga WordPress iyo qoraalada leh koodka gaaban.
Intaa waxaa dheer, waxaad si fudud u dejin kartaa saacadaha iyo maalmaha ay heli karaan macaamiisha si ay u ballansadaan. Kadib, ballamaha ballanku si toos ah ayey ula jaanqaadi karaan Google Calendar.
Waxaad shidi kartaa ogeysiisyo kala duwan haddii isbedel la sameeyo, oo ay ku jiraan xasuusinta, burinta, beddelka adeegga, mowduuca, goobta, bixiyaha, waqtiga, iyo taariikhda.
Goobo badan, adeegyo, iyo shaqaale
Wuxuu abuuraa boosaska wakhtiga shaqaalaha isku xidhka, adeega, goobta, iyo wakhtiga/taariikhda
Jadwalka wakhtiga dabacsan
Waxay bixisa ogeysiisyada iimaylka
Waxay bixisaa qaabaynta Bootstrap ka jawaabaya hal iyo laba-column
Goobaha qaabka gaarka ah
Price: Bilaash, $59 shatiga nolosha
Amelia waa plugin kale oo xoog badan oo Boos WordPress ah oo ay fududahay in la isticmaalo. Waxay shaqeysaa habeen iyo maalin si loo hubiyo in macaamiishu ay balamo samaysan karaan. Waxa kale oo ay u ogolaataa macaamiishaada inay lacag ku bixiyaan onlayn ama offline.
Waxaad uga faa'iidaysan kartaa bilaash, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon ganacsiyada yaryar. Si kastaba ha noqotee, haddii aad tahay ganacsi weyn, nooca lacagta leh ee leh shatiga nolosha waa ikhtiyaar weyn.
Boossigan ballan-qaadku waxa uu bixiyaa hawlo badan oo gudaha ah. Waxay bixisaa ogeysiisyo SMS oo la isku halleyn karo, taasoo kuu oggolaaneysa inaad isla markiiba la xiriirto macaamiishaada iyo shaqaalahaaga. Iyada oo la adeegsanayo Google Calendar Synchronization, loo-shaqeeyayaashaagu waxay la socon karaan ballamaha Google ee gaarka ah.
Goobo ganacsi oo badan
Macaamiisha iyo shaqaalahaba la socodsii ballamaha wakhtiga dhabta ah
Ku dara shaqaale badan oo leh maalmo fasax ah iyo saacado shaqo
Wuxuu dejiyaa kala duwanaanshaha taariikhda iyo taariikho gaar ah oo leh jadwal kala duwan
Isku-dhafka Google-ka ee laba-geesoodka ah ee shaqaalaha
Waxay bixisaa jaantusyo iyo garaafyo waxqabadyada ganacsi ee kala duwan ee KPIs
Ku darayaa kuubannada dhimista
Price: Qorshaha Naqshadaynta - $49/sanadkii (1 degel), Qorshe qalab badan - $69/sanadkii (1 degel), Qorshaha Ecommerce - $69 (1 degel)
JetAppointment wuxuu bixiyaa dabacsanaan badan si loo habeeyo foomka ballansashada dhamaadka-hore. Marka laga soo tago foomamka ballan-qaadka ee fudud- si fudud, waxa kale oo ay la socotaa fursadaha shaandhaynta ee isticmaalka macaamiisha.
Ballan-qaadkan iyo kalandarka ballansashada plugin WordPress waxay taageertaa is-dhexgalka Woocommerce. Si buuxda ayay u dhammaystiran tahay waana fududahay in la rakibo. Waxa kale oo ay la midaysaa Ical, Integromat, Zapier, iyo Google Calendar.
Oggolow inuu dejiyo saacadaha shaqada iyo maalmaha fasaxa
Waxay taageertaa adeegyo badan iyo goobo
Waxay dejisaa ikhtiyaarrada wakhtiga ka hor iyo ka dib fadhiyada
U oggolow isticmaalka hal foomamka
Price: Bilaash, $89 hal mar la bixiyo
BooklyPro waa doorasho sare haddii aad u baahan tahay astaamo badan oo boos-buujin ah oo dhamaadka-dhamaadka ah. Waxay u ogolaataa shaqaalahaaga inay sii wadaan ballamaha soo socda, iyadoo ay ugu wacan tahay ogeysiisyada tooska ah. Waxa kale oo ay awood u siinaysaa shaqaalaha in ay ku xidhmaan Google Calendarskooda adeegyada ballansashada ee kala duwan.
Boossigan ballan-qaadku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si fudud u maareyso boosas badan. Haddii aad wado koox soo koraysa, tani waa xal fiican. In kasta oo aad isticmaali karto nooca plugin ee bilaashka ah, nooca lacagta la bixiyay ayaa ah doorasho ka wanaagsan haddii aad rabto inaad gasho sifooyin ballan-qaad oo horumarsan iyo taageero.
Naqshad soo jiidasho leh oo u jeedda hore iyo foomamka ballansashada
Waxay ku biirtaa WooCommerce iyo Google Calendars
Tilmaamo boos celin si buuxda uga jawaabaya
Falanqaynta lagu dhex dhisay iyo tirokoobyada boosaska badan
Ku shaqeeya cabbir kasta oo shaashad ah
Waxay bixisaa isku xidhka nidaamyada qolo saddexaad oo badan
Wuxuu ku aqbalaa lacag bixinta meelo kala duwan oo lacag bixin ah, sida PayPal iyo Stripe
6. Booska Kooxda
Price: $ 28 / bishii
Booska kooxdu waxay leedahay nashqad jawaab celin buuxda leh oo si fudud ula midaysa Khariidadaha Google. Waxa ay soo bandhigtaa sifooyin adag iyo nidaamka oggolaanshaha ballan ka hor. Nidaamkeeda summada gaaban waxa uu awood kuu siinayaa in aad geliso hawlqabadyo badan nidaamka ballansashada adigoo gujinaya fudud.
Plugin-ka boosaska WordPress ee la awoodi karo wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku xidho goobo lacag-bixineed oo kala duwan, oo ay ku jiraan PayPal iyo Stripe. Waxay la socotaa saddex qaab-ku-dhisan: Jadwalka hore ee caadiga ah, adeegyada aan la qorshayn, iyo dhacdooyinka soo socda.
Maadaama ay bixiso dabacsanaan aad u fiican, waxaad ku dari kartaa meelo badan. Waxaad sidoo kale si degdeg ah u ururin kartaa xogta macaamiisha. Mar kasta oo ay macaamiishaadu rabaan inay kaydsadaan boosaska wakhtiga, waxaad ku dari kartaa maab.
Aqbala lacag bixinta PayPal iyo Stripe
Kala saara jadwalka ku salaysan inta adeeg bixiyayaasha iyo shaqaaluhu yihiin
Wuxuu ku daraa Google Calendar
Foomamka ballansashada casriga ah iyo quruxda badan ee leh tillaabooyin yar
Maabku waxay ku dhex milmeen foomamka boosaska
Price: $ 79 / bishii
LatePoint waa mid ka mid ah ballan-qaadyada ugu dareen iyo toosan iyo plugins ballan. Waxaad si toos ah u abuuri kartaa shirarka Zoom ee ballamaha ballansan. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad la hadasho macaamiisha si aad uga jawaabto su'aalahooda ku saabsan qabanqaabada oo aad u soo dirto xusuusin iyo ogeysiis SMS.
Kooxdaadu waxay habayn karaan ballankooda iyo jadwalkooda laga heli karo dashboardskooda. Habka habayntu waxay qaadataa wax ka yar shan daqiiqo in la dhammaystiro. Marka la rakibo oo la rakibo, waxaad bilaabi kartaa abuurista wakiilada, dejinta saacadaha shaqada, iyo ku darista adeegyada.
Intaa waxaa dheer, macmiilkaagu wuxuu la geli karaa shabakadaha bulshada ee caanka ah si uu horay ugu buuxiyo macluumaadka shakhsiyeed. Kadib abuurista akoon, waxay bilaabi karaan inay maamulaan boos celintooda onlayn.
Guud ahaan, Latepoint waa plugin ballan-qaad ah oo ay tahay in la haysto. Waxaad ku tiirsanaan kartaa dashboardkeeda maamulka ee casriga ah oo nadiif ah si aad si fudud ugu maamusho macaamiisha iyo adeegyada oo aad u aragto warbixinnada waxqabadka wakiilka.
Waxa uu ku xidhaa shaqaalaha akoonnada zoom-ka oo si toos ah u abuuraa kulammo zoom ah
Waxay taageertaa soo-saareyaal lacag-bixineed oo badan
Fudud in la isticmaalo dashboard shakhsi ahaaneed ee shaqaalaha
Oggolow in lala sheekaysto macaamiisha oo loo diro faylasha la soo dejisan karo
Muujinaya xulashada aagga wakhtiga si ay ula shaqeeyaan macaamiisha adduunka oo dhan
Wuxuu bixiyaa xasuusin iyo ogeysiis SMS
Oggolow inuu galo shabakadaha bulshada
Price: $ 59 / bishii
HBook wuxuu kuu ogolaanayaa inaad abuurto foomamka ballansashada iyo jadwalka helitaanka si aad u aqbasho boos celinta khadka. Waxay bixisaa dabacsanaan badan iyo shaqeyn si loo dejiyo heerarka xilliyeedka. Waxa kale oo aad dejin kartaa qiimo dhimis khidmadaha nadiifinta, joogitaanka ugu yar, joogitaan dheer oo dheeraad ah, iwm.
Buug-yaraynta WordPress-ka-sare ee lagu qiimeeyay waxay ku habboon tahay dadka ganacsiga ku leh warshadaha martigelinta, oo ay ku jiraan garoommada, guryaha fasaxa, hoteellada, B&B, si loo magacaabo dhowr. Waxa ay leedahay qaab dhise jiid-iyo-dhis ah, kaas oo kuu ogolaanaya inaad doorato tafaasiisha macmiilka aad ku xidhayso.
Waxaad ku xidhi kartaa ballankaaga shabakado kala duwan, oo ay ku jiraan Booking.com, VRBO, HomeAway, iyo Airbnb. Taageerada summada gaaban waxay awood kuu siinaysaa inaad ku darto foomamka ballansashada, qiimaha miiska, iyo jadwalka helitaanka meel kasta oo ka mid ah mareegaha WordPress wax yar gudahood.
Aragtida kalandarka si aad si fudud ugu aragto boos celin diyaar ah
Waxa uu leeyahay miiska boos celinta si uu u eego tafaasiisha dhammaan boosaska, u beddelo hoyga, oo uu faallooyinka ugu daro
Hababka lacag bixinta ee badan, sida Mollie, Cardlink, Square, PayPal, Stripe, iwm.
Price: Qofeed - $99, Meherad - $199, Meherad+ - $29
BirchPress waxay ku fiican tahay kuwa raba inay qabtaan kaarka deynta iyo lacag bixinta PayPal dhib la'aan. Balankan la isku halayn karo ee WordPress iyo ballan-qabsiga ayaa kaa dhigaya habka lacag-bixinta mid fudud adiga. Haddii aadan rabin inaad isticmaasho kadinka lacag bixinta PayPal, waxaad xor u tahay inaad ku qabato lacag bixinta ikhtiyaarada albaabada kale ee is dhexgalka WooCommerce.
Haddii aad ka shaqeyso ganacsi xagga caafimaadka iyo fayoobaanta, salon iyo quruxda, baabuurta, jimicsiga, ama warshadaha daryeelka caafimaadka, BirchPress waa ikhtiyaar aad u fiican. Waxay kaa caawinaysaa in habka jadwalka uu fududeeyo. Waxay si toos ah uga ilaalinaysaa dhammaan ballamaha ka shaqaynta dashboardka WordPress.
Tilmaamaha is-beddelka horumarsan
Habaynta ballamaha fudud oo iska diiwaan geli qaabaynta
Diraa iimaylo iyo xusuusin marka qof baajiyo, beddelo, ama ballan qabsado
Waxay ku biirtaa Google Calendar, Android, iPhone, ama Outlook si loo soo dejiyo loona dhoofiyo taariikhaha ballanta
Boulevard waa plugin la aamini karo oo qabsasho WordPress ah kaas oo fududeeya oo isku xidha socodka shaqada adag ee hal dashboard. Waxay deddejisaa wax soo saarka iyadoo la raacayo jadwal sax ah.
Boossigan ballansiga ee degelka WordPress wuxuu awood kuu siinayaa inaad habayso ololayaasha iyo ballamaha leh profiles macmiil oo faahfaahsan. Waxaad xogta u rogi kartaa aragtiyo qiimo leh adigoo isticmaalaya warbixino la beddeli karo. Waxay kaydisaa taariikhda macaamiisha waxayna bixisaa isgaarsiin habboon iyadoo meesha ka saaraysa hawlaha gacanta.
Isku xirka oo fududeeya socodka shaqada ee adag hal meel
Waxay ku deddejisaa wax soo saarka jadwal sax ah
Waxay hawlgelisaa haynta macmiilka iyada oo loo marayo ballamaha gaarka ah
Warbixinada la beddeli karo si loo falanqeeyo hawlqabad sahlan
Plugin boos-u-dhigista WordPress waa wax ka badan jadwalka taariikhda leh foom. Waxay la socotaa astaamo hagaajin kara guud ahaan hawlahaaga ganacsi. Waxay ka caawisaa habaynta socodka shaqada iyadoo kordhinaysa qanacsanaanta macaamiisha. Ka dooro xulashooyinka kore oo samee farqi weyn.
Sida loo soo sheego shilalka, khataraha iyo dabinada xawaaraha ee Khariidadaha Apple
Sida loola wadaago ETA-gaaga Khariidadaha Apple gudaha iOS 14.5